Fashion Nhungamiro yekutenga
Kudzoka muna 1907, kambani yekugadzirwa kwekunze kwekunze Luhta yakatanga Vihtori Luhtanen pamwe nemudzimai wake. Kutenda kuhutano hwakanaka hwezvigadzirwa, uye mweya wemwana webhizimisi, vadziki vekambani yakakwanisa kuponesa dambudziko rekupedzisira-hondo nekuremekedza uye kusimbisa zvakasimba nzvimbo dzavo mumusika wepasi. Nhasi pasi pehuturo Luhta inobudiswa zvipfeko zvakasiyana-siyana zvevarume, vakadzi nevana, pamwe chete nemapurasitiki. Asi nzvimbo inotungamira mukugadzirisa kwayo inopihwa nemuiti wezvinonyanya kumira pasi jekete - yakashamisika, inoita uye yakatendeka, iyo vakadzi vazhinji vemazuva ano vemafashoni vanofunga zvakanaka kune guta rechando.
Vakadzi vokuFinland vanodonha jekete Luhta
Ndivanaani kunze kweFinns vanofanira kuziva kuti chakaoma chando chechando chakafanana. Zvechokwadi, saka, zvinhu zvakasikwa munyika ino zvinopesana zvakanyanyisa kutengesa kwemafuta, kuvepo kwezvinhu zvakakosha, tsvina yakanakisisa uye yakasikwa yakagadzirwa. Finnish pasi jackets yevakadzi Luhta, yakasikwa nemitemo yose, uye maererano nemitambo yekare, kwete kungotonhora mumamiriro emamiriro ekunze, asiwo inonyatsosimbisa hutsika uye mararamiro emuridzi wayo.
Pasina mubvunzo, mhando yezvinhu zvinogadzirwa zvinofadza. Mufumi muvara wepepa weLuhta madzimai pasi, maziso avo ekutanga ekugadzira, kuvapo kwechiedza-kuratidza mavara nemashoko akawanda anobatsira - haazosiyi asina kufanirwa chero fashionistista. Uyezve, iyo yakasiyana-siyana yakasiyana-siyana zvokuti kunze kwekunze kwekunze kwemitambo, vasikana vemazuva ano vanogona kutora jekete yakakodzera yechando yezuva nezuva vakapfeka mune metropolis. Mutsara wezvinhu unofungidzirwa kunze kwemashoko maduku, ndicho chikonzero maFinnish pasi majeketi evakadzikadzi Luhta akakwana zvakakwana mumufananidzo, musanyadzisa kufamba. Uye chinonyanya kukosha, vanochengetedza kupisa kunyange pamatambo akadzikisa zvikuru.
Horse riding horsecases
Zuva rezhizha rinopfeka
Fur coat ye fox
Zvekare bhokete mabhoti pachikuva
Fur nguo dzaPavlov Posad shawls
Nzira yekusarudza huto hwehuto kubva mink?
Cardigan ne hood
7 zvivako zvakasiyana-siyana zvezvikara izvo zviongorori zvakaitwa
Andrew Garfield zvakare akataura zvisina kunaka nezvehutano hwake hwepabonde
Patties nemazai uye zvinyoro eiii
Horare - kurwisa
Slimming products that reduce the appetite
Imbwa zvokudya Eukanuba
Flexible pasi plinth
Ko chiberekero chinobvumirana sei mushure mokuberekwa?
Ndeipi iyo toxicosis inomira mumadzimai ane pamuviri?
Gore reMutsva mifananidzo yepamuviri kumba
Nzira yekutambisa wrinkles pahuma?
Nzira yekudyara winter raga mukuwa?
Psychology yemurume ari nemakore makumi mana
Zvinoita here kushambidza huno?
Mifananidzo yakaisvonaka yevasikana
Mashizha eVoodoo yekukwezva mari, rudo uye rombo
Zviroto zvekudzidzira 2016
Chii chinorota marara pamusoro?